तेरो, मेरो र प्रतिशतमा अल्झिएको एकता प्रक्रिया - Jhilko
सांगठनिक एकता सम्पन्न गर्न बसेका बैठकहरु निष्कर्षहीन हुनु नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को पार्टी जीवनलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने सङ्केत हो । विचारका आधारमा पार्टी संगठनलाई अन्तिम रुप दिने हो भने यो कुनै महाभारत होइन । सचिवालय स्तरका बैठकहरु नै यसरी निष्कर्षविहीन हुनुले नेकपालाई दूरगामी प्रभाव पार्न सक्छ । पार्टीका उपल्ला बैठकहरु नै निष्कर्षमा नपुग्दा तल्ला कमिटीहरुमा पर्ने प्रभाव नकारात्मक नै हुनेछन् ।
एकता टुङ्गोमा पु¥याउन कार्यदलमाथि कार्यदल, बैठकमाथि बैठक नै गरिरहने हो भने त्यहाँ नितान्त अराजनीतिले काम गरेको ठहर हुनेछ । पार्टी संगठन नेताका टाउको गनेर, गुटबन्दीको प्रतिशत मिलाएर गर्ने हो भने त्यो सफल भइहाल्यो भने मोर्चासम्म बन्ला । यस्ता मोर्चाहरुको संगठन भनेको अन्ततः विचारको संगठन नभएर गुटहरुको बन्नेछ । कम्युनिस्ट पार्टीमा विचार समूहहरु हुनु अनौठो होइन । विचार समूहहरुबाट पार्टी संगठन निर्माण गर्नु सहजै हुन्छ । तर, नेकपामा देखिएको यो समस्या होइन । कसले प्रभाव जमाउने भन्ने आधारमा नेकपाको पार्टी संगठनमा निर्माण गर्न खोजिएको देखिंदैछ । त्यसैले त्यहाँ मतैक्यता आउन नसकेको हो ।
कम्युनिस्ट पार्टी संगठन निर्माणका आफ्नै सिद्धान्तहरु छन् । लेनिनवादी संगठनको ढाँचा तय गर्न त नेपालको वर्तमान राजनैतिक परिवेशले नदेला तर संगठन निर्माणको आफ्नै परिवेश अनुसार त्यस्ता सूत्रहरु निर्माण र विकास गर्न सकिन्छ । कुनै सैद्धान्तिक आधारबेगर जबर्जस्ती नेताका कदकाँटी अनुसार संगठन निर्माण गरी हालियो भने पनि त्यो हटियाको भीडभन्दा अलग हुने छैन ।
त्यस्तो संगठन निर्माण कुनै पनि बेला तासको घरझैं ढल्ने निश्चित छ । अहिले नेकपामा ठीक यस्तै भइराखेको त होइन ? सत्तारुढ पार्टीको रक्षा र विकासमा देखिएको यो अन्यौल कुनै जादु नीतिका आधारमा गरिएन भने अबका दिन पार्टी निर्माण सहज होला भन्न सकिन्न ।
‘घिउ बेचुवा र तरबार बेचुवा’ जस्तो कथालाई पार्टी संगठन निर्माणमा लागू गर्न खोज्दा यस्तै झमेला आउँछ । कमसे कम दुनियाँका दक्षिणपन्थी पार्टी निर्माणमा समेत यस्तो झमेला आएको देखिन्न । तर, कम्युनिस्ट पार्टी निर्माणमा नेपालमा देखिएको यो रडाको कुनै राजनैतिक सूत्रमा छैन । यस्ता राजनैतिक सूत्रविहीन नाटक गरेर टाउकाको मोलअनुसार संगठन निर्माण गरियो भने त्यो सामाजिक, सांस्कृतिक क्लब बराबर हुनेछ ।
यस्ता अराजनैतिक क्लबहरुले राजनैतिक आन्दोलन गर्ने त पत्याउनै सकिन्न, सामान्य संसदीय व्यवस्थालाई उपयोग गर्नसम्म सहायकसिद्ध हुन सक्तैन । पार्टीलाई विघटनको दिशामा हेलाउने हो भने चाहिं यो उपक्रम कारगर सावित हुनेछ ।
जसरी पार्टी एकतामा दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले पहल गरेका थिए, तलैसम्मको एकता प्रक्रियामा पनि एकपटक साहसका साथ पहल लिनुपर्छ । तेरो, मेरो र प्रतिशतमा अल्झिएको यो एकता प्रक्रियाको बहसबाट माथि उठ्न सक्नुपर्छ । एकताको घोषणापछिको यो नौ महिनाको तरिकाले त पार्टी बन्दैबन्दैन । –समयबद्धबाट
दक्षिण अमेरिकी कम्युनिस्ट पार्टीद्वारा अमेरिकी हस्तक्षेपको विरोध
आँपपीपल–हर्मी–भच्चेक सडकखण्ड अवरुद्ध
लगातार परेको पानीका कारण सडक भासिँदा उक्त सडकखण्डमा यातायात सञ्चालन हुन नसकेको हो...
सीले नेकपा नेताहरुसँग सामूहिक भेट्ने, प्रचण्डसँग छुट्टै...
कपा नेतासँगको भेटपछि सीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नेछन्...
राफेल हतियार सौदावाजीले थिच्ला मोदी सरकारको घाँटी ?
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारका लागि राफेल हतियार सौदाबाजीसम्बन्धी...
भरतपुर महानगरलाई ध्रुम्रपानरहित शहर बनाईदै
शैक्षिक सङ्घसंस्था, अस्पताल लगायतका निकायको एक सय मिटरको वरपर सुर्तीजन्य पदार्थ...